Rakhiyeyaasha Qalabka iyo Qalabka Warshad Maacuunta Wareegta Granular Granular | YiZheng
Mashiinka Daboolka Rotary Granular Bacriminta Noolaha & Xarunta waa qalab loogu talagalay in lagu daboolo kansarka leh budo ama dareere gaar ah. Nidaamka dahaadhku wuxuu si wax ku ool ah uga hortagi karaa cunidda bacriminta waxayna ilaalinaysaa nafaqooyinka bacriminta.
Waa maxay Mashiinka Daaweynta Wareegtada Bacriminta Granular?
Mashiinka Daaweynta Mashiinka Daaweynta Mashiinka Daboolaha ee 'Organic & Compound Granular Ferizer' waxaa si gaar ah loogu qaabeeyey qaab dhismeedka gudaha iyadoo loo eegayo shuruudaha nidaamka. Waa bacrimin wax ku ool ah qalabka wax lagu daboolo ee gaarka ah. Isticmaalka tiknoolajiyada dahaadhka ayaa si wax ku ool ah uga hortagi kara isku duubnaanta bacriminta oo lagu gaaraa saameyn tartiib tartiib ah. Mashiinka wadista waxaa wada hoos u dhigaha halka mootada weyn ay wadato suunka iyo wiishka, kuwaas oo mataano-maroodi ay ku howlan yihiin giraanta giraanta weyn ee durbaanka oo u weecata dhanka dambe. Ka-quudinta dariiqa oo ka soo baxa marinka ka dib markii lagu dhex daro durbaanka si loo gaaro wax soo saar joogto ah.
Qaab-dhismeedka Mashiinka Daboolka Rotary Bacriminta Mashiinka
Mashiinka waxaa loo qaybin karaa afar qaybood:
a. Qaybta qaybta: qaybta qaybta qaybta waxa ku jira qaybta hore iyo qaybta dambe, kuwaas oo ku xeran aasaaska u dhigma loona adeegsaday inay ka taageeraan durbaanka oo dhan meelaynta iyo wareejinta. Qeybtu waxay ka kooban tahay salka qaybta, qeybta giraangiraha taageerada iyo giraangirta taageerada. Dhererka iyo Xagasha mashiinka ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo la hagaajinayo kala dheereynta u dhaxeysa laba giraangiraha taageeraya xagga hore iyo gadaal gadaal inta la rakibayo.
b. Qaybta gudbinta: qaybta gudbinta waxay siisaa awood loogu baahan yahay mashiinka oo dhan. Waxyaabaha uu ka kooban yahay waxaa ka mid ah qaabka gudbinta, mootada, suunka saddex-geesoodka ah, soo-dhiciyaha iyo gudbinta qalabka iwm.
c. Durbaanku: durbaanku waa qaybta shaqada ee mashiinka oo dhan. Waxaa jira suun duuban oo lagu taageerayo iyo giraan giraam ah oo loogu talagalay in lagu gudbiyo banaanka durbaanka, iyo baffle ayaa lagu dhajiyay gudaha si loo hago qalabka si tartiib tartiib ah u socda oo si siman u daboolaya.
d. Qaybta dahaadhka: Dahaarka budada ama wakiilka dahaadhka.
Astaamaha Mashiinka Daawada Rotary Bacriminta Mashiinka
(1) Tikniyoolajiyadda lagu buufiyo budada ama tikniyoolajiyadda dareeraha ah ayaa mashiinkan daahan ka dhigay mid waxtar leh si looga hortago in Bacriminta isku dhafan ay xinjiroobaan
(2) Mashiinka guud wuxuu qaataa dahaarka polypropylene ama saxanka dahaarka leh ee birta ahama ee u adkaysta aashitada.
(3) Marka loo eego shuruudaha farsamada gaarka ah, mashiinkan dahaadhka wareega waxaa loogu talagalay qaab dhismeed gaar ah oo gudaha ah, sidaa darteed waa qalab wax ku ool ah oo gaar ah oo loogu talagalay bacriminta isku dhafan.
Mashiinka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Muuqaalka Muuqaalka
Xulashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Xulashada
Cabirka ka dib rakibidda (mm)
Xawaare (r / min)
4100 × 1600 × 2100
6100 × 1800 × 2300
6100 × 2100 × 2600
8100 × 2400 × 2900
Hore: Mashiinka Qaboojinta Drum Rotary
Xiga: Foornada hawo kulul
Hordhac Waa maxay Mashiinka wax lagu rakibo ee otomaatiga ah? Mashiinka Baakadaha ee Bacriminta waxaa loo isticmaalaa in lagu duubo pellet bacriminta, oo loogu talagalay xirmaynta agabka ee agabyada. Waxaa ku jira laba nooc oo baaldi ah iyo hal baaldi oo keliya. Mashiinka wuxuu leeyahay astaamaha qaabdhismeedka isku dhafan, rakibidda fudud, fududeynta, iyo hig ...
Hordhac Waa maxay Mishiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ahi? Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ahi waa qalab isku dhafan oo lagama maarmaan u ah geeddi-socodka soo-saarista bacriminta. Waxay ka kooban tahay isku darka dhululubo, jir, matoor, hoos u dhige, gacan rogaalcelis ah, qulqulaya qashin, nadiifinta xoqida, iwm.
Foornada hawo kulul
Hordhac Waa maxay makiinada kulul? Mashiinka Kulul-kululeeyaha wuxuu u isticmaalaa shidaalka inuu si toos ah u gubo, wuxuu sameeyaa qarax kulul iyada oo loo marayo daaweynta isdaahirinta sare, wuxuuna si toos ah ula xiriiraa maaddada kululaynta iyo qalajinta ama dubista. Waxay noqotay badeecad beddel ah oo laga helo isha kuleylka korantada iyo isha kuleylka tamarta dhaqameed ee warshado badan. ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Mashiinka Wareega ee Rotary? Mashiinka Mashiinka Wareegta ee Rotary waxaa badanaa loo isticmaalaa kala-soocidda alaabooyinka dhammaaday (budada ama granules) iyo alaabada soo-celinta, sidoo kale waxay xaqiijin kartaa qiimeynta alaabooyinka, sidaa darteed alaabada dhammaatay (budada ama granule) si siman ayaa loo kala saari karaa. Waa nooc cusub oo iskiis ah ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka? Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka wuxuu isku daraa alaabta ceyriinka ah, oo ka kooban cajalad isku qas ah, cudud isku dhafan, jir, xirmo gearbox ah iyo farsamo gudbinta. Astaamaheeda waxaa ka mid ah inuu jiro dhululubo lagu diyaariyey bartamaha diskka qasmada, dabool dhululubada ayaa lagu habeeyay ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Mashiinka Mashiinka Horizontal? Mashiinka Mashiinka Bacriminta Horizontal wuxuu leeyahay mashiin dhexe oo leh garbaha oo loo maleeyo siyaabo kala duwan oo u eg xargaha birta ku duuban usheeda dhexe, wuxuuna awood u leeyahay inuu u dhaqaaqo dhinacyo kala duwan isla waqtigaas, isagoo hubinaya in dhammaan maaddooyinka ay ku dhex jiraan. Horizonta. ..